Amathrendi angu-2 amakhulu kakhulu wokuvalwa kwe-Lace ka-2022 – SL Raw Virgin Hair LLC.
Ukuvalwa kweleyisi kuyathrenda ngo-2022. Izihloko ezishisa izikhotha zewigi, futhi ngezizathu ezinhle. Bheka ukuthi kungani ukuvalwa kweleyisi kuya kudume kakhulu ngo-2022.
Kukhona amawigi avala intambo. Bese kuba khona 2022 amawigi okuvala amaleyisi ashisayo ashisayo .
Futhi nginesiqiniseko sokuthi siyazi ukuthi yiziphi ofuna ukuzinyakazisa kulo nyaka. Uma ufuna ukubukeka umuhle futhi uqiniseka ukuthi uthrendayo onyakeni, kuyasiza ukwazi ukuthi yiziphi izitayela ezikuzo ukuze ugweme lezo okufanele zihlale esikhathini esidlule.
Ngakho-ke, athini amawigi esihloko esishisayo ka-2022, futhi ungawatholaphi?
Amathrendi ashisa izikhotha wewigi ka-2022 okudingeka ungene kuwo manje
Amawigi ama-lace akhiwe ngesandla abukeka engokwemvelo kanye namawigi angaphambili eleyisi aphakathi kwezitayela ezishisa izikhotha kumawigi ka-2022. Ukuhlukahluka kwezitayela zabo kungesinye sezizathu ezenza abantu besifazane bawathande. Futhi ubuhle ukuthi zingafika ngezitayela eziningi, njengalezi ezimbili esizigqamisa ngezansi.
Iwigi Yokuvalwa Kweleyisi Ehlanganisiwe
Isibonelo esihle kakhulu sewigi yokuvala intambo eyenziwe ngomthungo eyethu 18” I-Kinky Straight Lace Closure Wig
2. Amayunithi Angaphambili Weleyisi Ye-Wavy Yemvelo
I-20” I-Natural Wavy Lace Front Wig ihlukile eqoqweni lethu lamawigi enziwe ngokwemvelo amawigi angaphambili.
Lawa mawigi abukeka efanelekile unyaka ngoba alingana ngokuphelele nezithombe zezinwele ezihamba phambili ezihamba phambili zango-2022. Futhi lezo zitayela ezimbili, ngokusho NgoMsunguli Wesitayela Sezinwele Osaziwayo, LeAna McKnight, amagagasi omzimba anyakaziswayo kanye nekhanda lezinwele elinyakazayo eliya phezulu neliphansi. Futhi uma sikhuluma ngokuhle kakhulu, ungakwazi ukufeza lokhu kubukeka nge-ayina eyiyintshi engu-1-intshi, isivikelo sokushisa, isifutho sokubamba esincane, kanye nethayi yezinwele.
Nansi indlela ongafinyelela ngayo lokhu kubukeka okubili okuthrendayo ngewigi yezinwele zemvelo ezifanele
Ukwenza isitayela amawigi akho ezinwele zemvelo
Kunezindlela eziningi zokwenza isitayela ekuvaleni kweleyisi yakho. Kodwa okubili okudume kakhulu igagasi lomzimba elinyakaziswayo kanye nokubukeka kwesigamu phezulu-uhhafu ukuya phansi.
Nansi inkomba esheshayo yokuthi ungakuzuza kanjani kokubili.
Ukwenza isitayela igagasi lomzimba onyakaziswayo
Misa insimbi yakho yokugoqa ibe izinga lokushisa eliphakathi kuka-375 Fahrenheit no-395 Fahrenheit.
Isebenza ezingxenyeni ezincane kusukela ku-nape yakho, inkungu encane ngesifutho osithandayo sokuvikela ukushisa. Bese ugoqa izinwele zakho kude nobuso bakho, uvumele insimbi ihlale imizuzwana emihlanu. Khulula.
Bamba i-curl imizuzwana emihlanu noma kuze kuphole izinwele zakho.
Phinda le nqubo elula kuzo zonke ezinye izinwele zakho uze uqedele lonke ikhanda.
Futhi usunakho - ukubukeka kwegagasi lomzimba elihle kakhulu elizokuthatha usuku lonke nobusuku bakho.
Ukwenza isitayela uhafu phezulu-uhhafu-phansi
Ukubukeka kwesibili okuzothatha u-2022 ngokuvunguza kudlala ngothando, uhhafu phezulu-uhhafu-phansi futhi olungele amawigi e-lace closure
Nakhu ozokudinga ukuze wenze isitayela salokhu kubukeka:
I-intshi engu-1-intshi yokugoqa
Ibhulashi le-Boars bristle
Nansi indlela yokwenza isitayela:
Misa insimbi yakho egoqayo ibe izinga lokushisa eliphakathi kuka-375 Fahrenheit no-390 Fahrenheit.
Hlukanisa izinwele zakho zibe izingxenye ezimbili (kungaba ukusuka endlebeni kuya endlebeni - phezulu phezulu kwekhanda noma phansi ukuya enkabeni).
Ukusebenza ngohhafu ongaphezulu, bushelelezi ngebhulashi lakho, bese uvikela ingxenye engaphezulu ngethayi yezinwele.
Faka inkungu kancane izinwele zakho ngesivikelo sokushisa.
Bese uqala ukugoqa kusukela ngemuva. Songa izinwele ebusweni, ubambe cishe imizuzwana emihlanu, bese uyakhulula.
Qhubeka uze uqede, futhi uzobe ulungele ukuphuma ngokwenza okuhle kokuya phansi.
Izizathu ezinhlanu zokuthi kungani sincamela amawigi okuvala amaleyisi ngo-2022
Amawigi amaleyisi avamise ukuba nokulingana okuvikeleke kakhulu kunamawigi amaleyisi agcwele.
Lawa mawigi akhazimula kamnandi. Umklamo uqinisekisa ukuthi bakhululekile ukugqoka. Ngaphezu kwalokho, i-lace ivumela izinwele zakho ukuba ziphefumule. Uzozwa ukugeleza komoya ezinweleni nasekhanda lakho ngokungafani namawigi athungwe. Lokhu ekugcineni kungcono empilweni yekhanda lakho nezinwele zakho.
3. Okwama-DIYers nabesifazane abaqeqeshiwe ohambeni
Akulona uhlobo olufuna ukuya ku-stylist ngaso sonke isikhathi lapho ufuna ukukhanda izinwele okubabazekayo? Noma mhlawumbe ufuna okuthile okulula ukukufaka. Khona-ke, uzofuna enye yalezi wigs. Ukuvalwa kweleyisi kuphawula wonke amabhokisi alungile ukuze kube lula ukugqokwa.
4 Faka i-Glueless
Ukuvalwa kweleyisi namawigi ezinwele zeleyisi angaphambili kungaba kuhle kakhulu “okuhambisana nokuhamba” kwezinwele zemvelo.
NjengoMsunguli wethu, u-LeAna McKnight uhlala ethi, asifuni sonke ukugxumela kuhlanya lweglue. Kwesinye isikhathi sidinga nje into elula esabukeka iyinhle njengokufakwa okuhlala njalo ngaphandle kwezinkinga.
Ngewigi yokuvala intambo, uzoba nezinketho eziningi zesitayela. Ngakho-ke, cabangela izingxenye eziseceleni, izingxenye ezimaphakathi, namaponytails.
Zilungele ukugqokwa kwansuku zonke kochwepheshe, usomabhizinisi, futhi cishe nawo wonke umuntu wesifazane phakathi. Banikeza ukuguquguquka kokubukeka okusha ngaphandle kokufunda amasu okufaka iwigi.
6. Ubude besikhathi eside bewigi
Manje, le nzuzo incike kumenzi kanye nekhwalithi yewigi yakho. Kodwa, uma uthola iwigi yezinwele zomuntu engu-100% elandela zonke izindlela ezingcono kakhulu zokwakha izandiso zezinwele zekhwalithi, lapho-ke ingahlala iminyaka emi-5 ngokulungiswa nokunakekelwa okufanele.
Usenemibuzo mayelana namawigi akho okuvala amaleyisi?
Ngakho, izimpendulo ezimbalwa ezisheshayo kweminye yemibuzo evame ukubuzwa esivame ukuyithola mayelana namawigi e-lace closure
Kuyini ukuvala ileyisi namawigi angaphambili eleyisi?
Uma umusha ku-wig terminology, ukuvalwa kweleyisi neleyisi yangaphambili kubhekisela endleleni amawigi aklanywa ngayo kanye nokubekwa kweleyisi. Ngewigi yokuvala intambo, iklanyelwe ukuphinda uhlukanise indlela ngokwemvelo ongazihlukanisa ngayo izinwele zakho. Amaleyisi angaphambili aklanyelwe umugqa wezinwele ukusuka endlebeni kuya endlebeni.
Hlobo luni lwamawigi okuvala intambo okufanele uwathole?
Njengenjwayelo, sincoma kuphela u-100% wezinwele zabantu kunoma iyiphi iwigi oyithengayo. Kufanele kube izandiso zezinwele zomuntu ezisezingeni eliphezulu ukuze uthole imiphumela oyifunayo. Bese, uhlanya ngezitayela nemibala ofuna ukuyikhetha (yize sincoma ukuthi ubheke izitayela ezifana nokuma kobuso bakho).
Yikuphi okungcono? Iwigi yeleyisi yangaphambili noma iwigi yokuvala intambo?
Konke kuyindaba yokuncamela isitayela. Kepha uma ufuna ukunyakazisa izitayela ezishisa kakhulu zango-2022, zombili izitayela zewigi zilungele ukwenza ube nemfashini.Ngakho-ke, dlulela ku-SL Raw Virgin Hair futhi uthole I-Textured Lace Closure Wig kanye Ne-Natural Wavy Lace Frontal Units